ब्रुस ली को मृत्यु रहस्यमय – Kendra Khabar
ब्रुस ली को मृत्यु रहस्यमय
in अन्तराष्ट्रिय, समाचार, समाज
२०७८, ११ बैशाख शनिबार १०:३७
ब्रुस लि । यो नामसँग विश्व परिचित छ । कसले चिन्दैन मार्सल आर्टका यी उस्ताजलाई ? जबकि यो चिनारी उनले छोटो उमेरमा बनाएका थिए । किनभने ब्रुस लीको मृत्यु त्यसबेला भयो, जतिबेला उनको उमेर मात्र ३२ बर्षको थियो । सन् १९७३ जुलाई २० मा ।
ब्रुस लीको ख्याती जति चमत्कारिक छ, उत्तिनै रहस्यमयी छ उनको मृत्यु । मार्सल आर्ट कलाकार एवं हलिउड अभिनेता ब्रुस ली कसरी अल्पायुमै बिते ?
ब्रुस लीको मृत्यु हुँदा उनकी छोरी शानोन ली चार बर्षकी मात्र थिइन् । आफ्ना पितासँग विताएको क्षणहरुलाई स्मरणिय राख्न उनले एक वृत्तचित्र बनाएकी थिइन् । शानोनले त्यसबखत ब्रुस लीसँग जोडिएको केही कुरा बिबिसीसँग साझेदार गरेकी थिइन् ।
बिबिसीसँग शानेनेले भनेकी छिन्, ‘मलाई त्यस्तो धेरै त केही याद छैन । आफ्नो घरको आँगनमा उनीसँग खेलेको सम्झना छ । हङकङमा हाम्रो अलग्गै घर थियो, जुन त्यहाँको लागि ठूलो कुरा थियो । मार्शल आर्ट बिना हाम्रो घरमा बस्नु असंभव थियो । उनी हामीलाई लात–मुक्का हान्न सिकाउथे । हामी कुस्ती एकदमै धेरै खेल्थ्यौं । मेरो पितालाई लाग्थ्यो कि बच्चाका लागि जूडो एकदमै उपयुक्त हो ।’
नयाँ फिल्ममा काम
मार्शल आर्टमार्फत एक नयाँ इतिहास रच्न चाहन्थे । उनी फिल्म सुटिङ र आफ्नो कुंग फू एकेडेमीको काममा व्यस्त रहन्थे । मृत्युको बखत उनी न धेरै बिरामी थिए न कुनै समस्याबाट ग्रस्त नै । अचानक उनको स्वास्थ्य बिग्रियो र भौतिक संसारबाट बिदा लिए ।
उनको मृत्युबारे स्मरण गर्दै शेनान भन्छिन्, ‘यो एक दुखद दुर्घटना थियो । ऊ एकदमै स्वस्थ र फिट थिए र आफ्नो करियरको उत्कर्षमा थियो । अचानक एक एलर्जिक रियक्सनबाट उनको मृत्यु भयो । त्यसदिन उनी आफ्नो एक सहयकर्मीसँग अपार्टमेन्टमा थिए । उनीहरु नयाँ फिल्ममा काम गरिरहेका थिए । अचानक उनको टाउको दुख्यो । दुखाई कम गर्ने औषधि दिइयो । उनको मस्तिष्कमा रक्तश्राव भयो । ऊ ढल्यो र फेरी कहिल्यै उठेनन् ।’
ब्रुस लीको अन्तिम यात्रको स्मरण गर्दै शेनान भन्छिन्, ‘मलाई हङकङमा भएको अन्तिम यात्राको सम्झना छ । हजारौं, लाखौं मान्छे सडकमा ओर्लिएका थिए । मैले शोकको बेला लगाउने पारम्पारिक सेतो चिनिया पहिरन लगाएकी थिएँ । उनलाई खुला कफिनमा राखिएको थियो । यो एकदमै विचलन ल्याउने खालको थियो ।’
ब्रुस लीले आफ्नो जीवनकालमा धेरै फिल्म खेलेनन् । तर, जुन फिल्म खेले त्यसले उनलाई इतिहासकै चर्चित व्यक्तिको पंक्तिमा उभ्याइदियो । मार्शल आर्टको उनको कलाले विश्वलाई मोहित बनाइदियो । शेननलाई लाग्छ, ब्रुस लीको असली ख्याती भने उनको मृत्युपछि हासिल भयो ।
अभिनेताभन्दा बढी मार्शल आर्टिस्ट
मृत्युअघि उनी हङकङ र दक्षिण पूर्वी एशियामा ठूलो स्टार बनिसकेका थिए । उनी सडकमा हिँड्न सक्दैनथे । उनी जहाँ पुग्थे, भिडले छोपिहाल्थ्यो । मान्छेहरु उनलाई प्रत्यक्ष हेर्न, फोटो खिच्न र अटोग्राफ लिन आतुर हुन्थे । यद्यपि पश्चिममा उनी त्यती धेरै ठूलो स्टार थिएनन् ।
हलिउडको कम्पनी वार्नर ब्रदर्सको सहयोगमा बनेको उनको फिल्म ‘एन्टर द ड्रागन’ उनको मृत्युको एक महिनाअघि सार्वजनिक भयो । यो फिल्मले उनलाई नयाँ उचाई दिलायो र बाँकी फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकसम्म पु¥याउने बाटो खोलिदियो । त्यसपछि उनको क्रेज निरन्तर आकासियो ।
यद्यपि ब्रुस लीको दुनिया केवल एक फिल्म अभिनेताको रुपमा होइन, बरु एक उम्दा मार्शल आर्ट कलाकारको रुपमा रह्यो । ब्रस ली स्वयम् पनि मार्शल आर्टलाई सर्वाधिक महत्व दिन्थे ।
ब्रस लीको कार्शल आर्टबारे शेनान भन्छिन्, ‘उनले आफ्नो जीवनमा मार्शल आर्टलाई एक अलग कलाको रुपमा विकास गरे । उनी स्वयम् अभिनेता वा लेखकभन्दा बढी मार्शल आर्टिस्ट मान्थे । उनले आफ्नो कलामा सादगी, सरलता र स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरी माने । पुरानो र पारम्पारिक तरिकाले स्वतन्त्रता नै उनको कलाको आधार थियो ।’
ब्रुस लीलाई जब हङकङमा बस्न कठिन भयो, तब उन्नत जीवनको खोजीमा अमेरिका पुगे । सफलताको शिखरमा पुगेका यि स्टारले अमेरिकामा भने पुन संघर्ष गर्न थाले । तर, त्यहाँ पनि उनले कति पटक पूर्वाग्रहको सामना गर्नुप¥यो ।
शेनन भन्छिन्, ‘मेरो पिताले आफ्नो जीवनमा हर स्तरमा पूर्वाग्रहको सामना गर्नुपर्यो । हलिउडमा उनले चिनिया हुनुको पूर्वाग्रह झेल्नुपर्यो । यद्यपि बाल्यकालमा उनले हङकङमा पनि पूर्वाग्रहको समना गर्नुपरेको थियो । खासमा मेरो पिता पूर्णरुपमा चिनिया थिएनन् । उनकी आमा एक अर्धश्वेत महिला थिइन् । एक विद्यालयमा उनलाई यसकारण निकालिएको थियो कि उनी पूर्णत चिनिया होइनन् । उनी चाहन्थे जुन व्यवहार आफुमाथि भयो, त्यो अरुमाथि नहोस् ।’
ब्रुस लीको रोचक तथ्य
ब्रुस ली ५ फिट ८ इन्च अग्ला थिए । उनको तौल ६४ किलो थियो । यद्यपि उनमा अथाह तागत थियो । उनलाई इतिहासकै सबैभन्दा द्रत व्यक्ति भनिन्छ ।
–ब्रुस लीले बदमासहरुसँग लड्नका लागि मार्शल आर्ट सिकेका थिए ।
–ब्रुस लि यति तिब्र थिए कि उनको दृश्यांकन गर्न क्यामेराबाट पनि गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले उनको भिडियो श्लो मोशनमा देखाइन्थ्यो ।
–ब्रुस लिले सन् १९६२ मा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई अन्तिम ११ सेकेन्डमा १५ मुक्का र एक लात मारेका थिए ।
–ब्रुस ली पानी रुचाउँदैनथे । उनलाई पौडिन पनि आउदैनथ्यो ।
–ब्रुस लीले आफ्नो पुरा जीवनमा केवल एक पटक मात्र हार्नु पर्यो ।
–आफ्नो कमजोर आँखको कारण ब्रुस ली त्यो पहिलो व्यक्ति बने, जसले सबैभन्दा पहिले कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गरे ।
–६० को दशकमा पनि ब्रुुस लि मार्शल आर्ट सिकाउनका लागि दुई सय पचास डलर शुल्क लिन्थे ।
–ब्रुस लीले कोकाकोलाको क्यानमा आफ्नो औला घुसाउन सक्थे । भनिहालौं, त्यसबेला कोकोकोलाको क्यान अहिलेको एल्मुनियमको क्यानभन्दा धेरै बाक्लो हुन्थ्यो ।
–विश्वकै सर्वाधिक चर्चित मार्शल आर्टिस्ट ब्रुस लीले केवल ७ वटा हलिउड फिल्म खेले । यसमा तीन वटा फिल्म उनको मृत्युपछि मात्र सार्वजनिक भयो ।